Umnyango udingide ngezinkinga komasipala KwaZulu-Natal | News24
Umnyango udingide ngezinkinga komasipala KwaZulu-Natal
ISAYINKINGA indaba yezingqalasizinda ezindala nezingasekho esimweni komasipala abaningi KwaZulu-Natal.
Lokhu kuvezwe inhloko yoMnyango wezokuBusa nokuBambisana naboMdabu (Cogta) uMnuz Thando Tubane ngoLwesine olwedlule mhlaka-3 kuNhlaba (May) esithangameni sabezindaba ngaphambi kokuba uNqgongqoshe walo mnyango uNkk Nomsa Dube-Ncube ethule isabelo zimali salo mnyango semali engu -R1,6 million sangonyaka wezi-2018/19.
UMnuz Tubane uthe ingqalasizinda akusiyo inkinga yalo mnyango kuphela kodwa iyinkinga kuhulumeni kazwelonke.
“Inkinga enkulu ekhona ngengqalasizinda komasipala ukuthi zindala. Omasipala kumele beqale babeke eceleni imali yokunakekelwa kwengqalasizinda esabelweni semali.”
Uqhube wathi kuphinde kube nenkinga yokungabikho kwamanzi ezindaweni eziningi. Omasipala kumele bezame ukwenza isiqiniseko sokuthi abagcini sebesebenzisa kakhulu amaloli athwala amanzi ngoba lokho kudla izizumbhulu zemali.
“Omasipala kumele benze isiqiniseko sokuthi uma besebenzisa amaloli athutha amanzi akubi yinto eqhubeka isikhathi eside.
“Siyazi ukuthi abantu ngeke baze bahlale bengenawo amanzi kodwa kumele kubhekwe ezinye izindlela zokubahlinzeka ngamanzi.”
UMnuz Tubane usho lokhu nje indawo yaKwaPhupha nase-Bulwer e-Willowfontein inesikhathi esingaphezu kweminyaka emibili ingenawo amanzi.
Kwezinye izingxenye zakule ndawo ayabuya aphinde ahambe kanti kwezinye selokhu agcina ukubakhona ngo-2016.
Umasipala usebenzisa amaloli athwala amanzi ukuhlinzeka lo mphakathi.
Amalungu alo mphakathi akhuluma ne-Echo ngaphambilini athi atshelwa ukuthi ingqalasizinda eseyindala ingakho benenkinga yamanzi. Lo mnyango uphinde waveza inkinga yokukhwabanisa nokusetshenziswa kwezimali ngokungemthetho komasipala abahlukene kubalwa kuwo noMsunduzi.
Lo mnyango kuyimanje uphenya amacala ayi-16 okukhwabanisa komasipala abahluke. UMnuz Tubane uveze ukuthi uMasipala Msunduzi usuphenywa nayihhovisi loMvikeli woMphakathi (Public Prosecuter).
“Akusilona uphenyo olulodwa oluqhubekayo kuMasipala uMsunduzi kodwa siwumnyango sinolwethu, ihhovisi lomvikeli womphathathi kanye noMnyango wezeziMali nawo uqhuba olwawo uphenyo ngezinsolo zokukhwabanisa. Uma ngabe seyikhona imiphu-mela izobe isibekwa emhlanganweni wesigungu sikamasipala bese kuthathwa isinqumo ngemuva,” kubeka yena.
Inkinga enkulu ekhona ngengqalasizinda komasipala ukuthi zindala. Omasipala kumele benze isiqiniseko sokuthi uma besebenzisa amaloli athutha amanzi akubi yinto eqhubeka isikhathi eside. Siyazi ukuthi abantu ngeke baze bahlale bengenawo amanzi kodwa kumele kubhekwe ezinye izindlela zokubahlinzeka ngamanzi.